November 30, 2012 - Written by
Xudur:-Wararka naga soo gaaraya gobalka Bakool ayaa sheegaya in maanta dagaal culus uu dhexmaray ciidamada DFS iyo Ururka Al-Shabaab duleedka Degmada Xudur ka dib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday ciidamada Dowlada fedraalka ee Soomaaliya.
Dagaalka ayaa ahaa mid culus oo socday ku dhawaad saacad waxaana ku dhintay 10 rux sida ay dad goobjoogayaal ah oo ku sugan Degmada Xudur ay sheegeen.
Gudoomiyaha gobolka Bakool ee DFS Maxmed Cabdi Mayoow oo saxaafada saaka la hadlay ayaa guul ka sheegtay dagaalka maanta ka dhacay duleedka Xudur wuxuuna sheegay in ay askar ka dileen Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka maanta ka dhacay duleedka Xudur ayaa waxaa uu ku beegmayaa xili ay ciidamo badan oo Itoobiyaan ah ay soo galeen gobalada Bakool iyo Gedo kuwaas oo taageeraya ciidamada DFS .
Madaxweynaha DFS Xasan Sheekh Maxmuud iyo Raisulwasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa xalay kulan ay wada qaateen waxay ku sheegeen in labada dowlad ay ku heshiiyeen in ay iska kaashadaan Ganacsiga iyo Amniga iyada oo ay dowlada Itoobiya balan qaaday in ay tababar u furi doonto saraakiisha ciidanka DFS.
267,903 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress